ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်ကသွားခဲ့တဲ့ ဥရောပခရီးစဉ်မှတ်တမ်းလေးကိုအမှတ်တရချပြရင်း နှင်းဆီညီအစ်ကိုတွေနဲ့ လူငယ်သဘာဝအဆော့လွန်ခဲ့ပုံကို ပြသလာတဲ့ နေတိုး - Cele Connections
နေတိုးက “ဒီခရီးသွားအစီအစဉ်အ​ဟောင်းလေးကို New Version ​လေးပြန်လုပ်​​ပေးရတာက​တော့ အခုလိုကာလမှာ အိမ်မှာနေရတဲ့အချိန်​တွေများလာခြင်း​ကြောင့် ဖြစ်​ပေါ်​နေတဲ့စိတ်မွန်းကျပ်မှု​တွေကို ဝင်ကြည့်မိတဲ့အချိန်ခဏတာအတွင်းမှာ စိတ်လွတ်လပ်​ပေါ့ပါးပြီး အပန်း​ပြေ​စေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပြီးတော့ ကျွန်​တော်ကိုယ်တိုင် 📹📸 camera ကိုင်ရိုက်ကူးထားရတာဖြစ်လို့ကျွန်​တော့်အမြင်​တွေကိုသာ 90% ဦးစား​ပေးရိုက်ကူးထား​တဲ့အစီအစဉ်​လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ချက် / အခုအစီအစဉ်​ကိုနောက်ဆုံးသွား​ရောက်ခဲ့ကြတဲ့ Paris မြို့က​နေအ​ရှေ့ကိုပြောင်းပြန်​ ဖော်ပြ​​နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကဲ ! …. 🇩🇰(ဒိန်းမက် ) နှင့် 🇳🇱(နယ်သာလန် ) ပြီး​တော့ ဥ​ရောပနိုင်ငံများသို့ ကျွန်​တော်တို့နဲ့အတူ​ လျှောက်လည်ကြရ​အောင် ❤ 2012 julyတုန်းကတည်းကရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို့လူငယ်တို့ရဲ့သ​ဘောသဘာဝအရ​ဆော့တာ​လေး​တွေပါ​နေတာကို​တော့ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါခင်ဗျာ😄” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို မျှဝေပေးလာပါတယ်။
နတေိုးက “ဒီခရီးသှားအစီအစဉျအဟောငျးလေးကို New Version လေးပွနျလုပျပေးရတာကတော့ အခုလိုကာလမှာ အိမျမှာနရေတဲ့အခြိနျတှမြေားလာခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပျေါနတေဲ့စိတျမှနျးကပျြမှုတှကေို ဝငျကွညျ့မိတဲ့အခြိနျခဏတာအတှငျးမှာ စိတျလှတျလပျပေါ့ပါးပွီး အပနျးပွစေဖေို့ရညျရှယျပါတယျခငျဗြာ။ ပွီးတော့ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ 📹📸 camera ကိုငျရိုကျကူးထားရတာဖွဈလို့ကြှနျတေျာ့အမွငျတှကေိုသာ 90% ဦးစားပေးရိုကျကူးထားတဲ့အစီအစဉျလေးလညျးဖွဈပါတယျ။ မှတျခကျြ / အခုအစီအစဉျကိုနောကျဆုံးသှားရောကျခဲ့ကွတဲ့ Paris မွို့ကနအေရှကေို့ပွောငျးပွနျ ဖျောပွနခွေငျးဖွဈပါတယျခငျဗြာ။ ကဲ ! …. 🇩🇰(ဒိနျးမကျ ) နှငျ့ 🇳🇱(နယျသာလနျ ) ပွီးတော့ ဥရောပနိုငျငံမြားသို့ ကြှနျတျောတို့နဲ့အတူ လြှောကျလညျကွရအောငျ ❤ 2012 julyတုနျးကတညျးကရိုကျကူးထားတာဖွဈလို့လူငယျတို့ရဲ့သဘောသဘာဝအရဆော့တာလေးတှပေါနတောကိုတော့ခှငျ့လှတျပေးကွပါခငျဗြာ😄” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို မြှဝပေေးလာပါတယျ။